China Amabhodlela asemabhodleleni wekhwalithi ephezulu engamamitha ayisisekelo ayingilazi efektri nabaphakeli | Jiamei
Ibhodlela likawoyela elibalulekile
Ibhodlela lengilazi lomhluzi
Okubalulekile ukufaka ibhodlela kawoyela
I-Mechanism roll-on bottle / ipayipi roll-on ibhodlela
Muhle setha ibhodlela
Ibhodlela lesisekelo samanzi
Nail ibhodlela sula
Amabhodlela wekhwalithi ephezulu engabonakali yesikwele se-Glass Dropper Liquid Foundation
Amandla: 20ml, 30ml, 40ml
Indawo Yomsuka: Shanghai.Lianyungang, Ningbo
Ilogo: Ukuphrinta Ngokwezifiso Ilogo
Inkokhelo: T / T.
Amabhodlela Esisekelo Esingabonakali Sengilazi Ye-Dropper Liquid Foundation
usilika screen, wokushaya ashisayo, frosting, ilebula, umbala wokunyathelisa，ukuhlobisa ukudubula nezinye izinqubo
Iphelele nge-Liquid Foundation
I-DHL, i-Fedex, i-UPS, ukuthuthwa kwomoya, ukuthuthwa kolwandle
Njengoba isicelo sakho
Amabhodlela ayisisekelo esisekelo esiketshezi ayenziwe ngengilazi esezingeni eliphakeme, ukuvikelwa okuhle kwemvelo, futhi ngokuhambisana namazinga ekhwalithi kazwelonke. Ihambisana ne-dropper, futhi kunezinhlobo eziningi ezahlukahlukene zamadrophu ekhanda le-gel. Ungakhetha ngokuya ngokuncamelayo, imininingwane yokuxhumana namakhasimende.Isivimbo esiqinile sengqimba sivimbela ukungcoliswa. Umlomo webhodlela usebenzisa ukwakheka kwentambo nomlomo wokucindezela ofanayo ukuvimbela ukuvuza koketshezi. Ngezansi kwebhodlela lenzelwe umklamo we-concave ne-convex anti-skid design, ukuqina phansi kwebhodlela. Kuyisinqumo esingcono kakhulu sokubamba ama-serum, izinto zokuhlanza izandla, ama-lotion, njll
Ukucaciswa kwamabhodlela ayisisekelo esisekelo esiketshezi angama-20ml, 30ml no-40ml.Ungakhetha ukucaciswa ngokuya ngezidingo zakho. Inkampani yethu inesikrini sikasilika, ukunyathela okushisayo, isithwathwa, ilebula, umbala wokuphrinta, ukuhlobisa ukudubula nezinye izinqubo. Sizokopisha isithombe osinikeze kahle ukuqinisekisa ukwaneliseka kwakho. Sinenombolo enkulu yendawo elinde inkambiso yakho yokucubungula.
1. Ukwenza ngokwezifiso umbala: udinga ukuhlinzeka ngesampula noma inombolo yombala wePantone
2. Ukwenza ngokwezifiso ukuphrinta: udinga ukuhlinzeka ngemibhalo yokuphrinta yefomethi ye-CDR / AI
Inqubo: Ukuphrinta kwesikrini sokushisa okuphezulu / ukushisa okushisayo kwesiliva / i-electroplating UV / sanding / umbala wesifutho
Uma udinga, singakunikeza isampula kuwe ukuze uqinisekise isitayela sokugcina. Ngoba sinokuphrinta kwesikrini, ukunyathela okushisayo, isithwathwa, ilebula, umbala wokuphrinta nezinye izinqubo, ukuze sikwazi ukwenza ngezifiso amagama ahlukile namaphethini wakho.Sicela uxhumane nesevisi yamakhasimende ukuthola imininingwane. Ngemuva kwalokho, ukhokha idiphozi, futhi sizokhiqiza umkhiqizo ngobuningi ngokusho kwesampula. Ekugcineni, umkhiqizo uthunyelwa kuwe futhi ulethwe kubhalansi yokukhokha ngemuva kokwamukelwa kwakho.Ngakho isivumelwano sethu sesenziwe.
Uma unemibuzo ongathanda ukuyibuza, ungaxhumana nabasebenzi bethu benkonzo yamakhasimende, bazokuphendulela. Sizokusebenzela ngenhliziyo yonke futhi sethemba ukufinyelela ukubambisana okuhle nawe.
Langaphambilini Ikhwalithi ephezulu yesikwele yamabhodlela esisekelo sengilazi esinezigqoko ezansi
Olandelayo: Amabhodlela angenalutho we-Luxury Flat Beer Essence Glass
Igumbi 2501, Isakhiwo 1, iBlock 2, iVanke Huaihai Tiandi, isifunda saseQuanshan, idolobha laseXuzhou, esifundazweni saseJiangsu